प्रचण्डले भने- अबको चुनावमा हामी एक नम्बर हुन्छौं, हेर्नुहोला – Pahilo Page
प्रचण्डले भने- अबको चुनावमा हामी एक नम्बर हुन्छौं, हेर्नुहोला
३१ श्रावण २०७८, आईतवार १८:४८ 102 पटक हेरिएको
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अब आउने चुनावमा आफूहरु एक नम्बरमा हुने दाबी गरेका छन् ।
आइतबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘वर्गप्रति, सिद्धान्तप्रति इमान्दार नहुनुभन्दा पार्टीकै विघटन गरेर, अध्ययन–अनुसन्धानमा लाग्नु वा किताब लेखेर बस्नु बढी इमान्दारीता हुन्छ ।’
‘हामीमा पनि विचलन हुने हो कि भन्ने प्रक्रिया निकै तीब्र छ । त्यतातिरै गइराखेको छ, हामीले थाहै नपाई,’ प्रचण्डले भने, ‘हामीले यसलाई कुन विन्दुमा ब्रेक गर्छौं त ? कसले गर्छ ब्रेक ? हामीले ब्रेक गर्ने हो कि हैन ? मुखले मात्रै ब्रेक गर्ने हो कि व्यवहारमा ?’ अबको चुनावमा हामी एक नम्बर हुन्छौं । हेर्नुहोला, पहिला पनि त्यति पत्याउँदैनथे, हामी एक नम्बर भयौं ।’
अहिलेको स्थिति सामान्य नरहेको प्रचण्डले बताए । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यसो हेर्दा ठीकैजस्तो देखिए पनि माओवादी पार्टी अरु बुर्जुवा प्रतिक्रियावादी भन्दा फरक नदेखिएको र त्यही दिशातिर गइरहेको प्रचण्डले बताए ।